Akwụkwọ ahụaja nke mechiri Samsung na Google ekwentị n'amaghị ama | Gam akporosis
Oge ole na ole gara aga akụkọ a akwụkwọ ahụaja na bụ ike nke na-eme ka gị Samsung ekwentị okuku. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ na-egbochi ya na-enweghị ike iji ya. A «acha» ozi ọma ke akpa itie, ma mgbe ọ bụ Ice Universe onwe ya, otu n’ime Samsung kasị ewu ewu leakers, mgbe anyị nwere anya na ya.
Ọ dị ka ee, enwere ihe kpatara ya ma ọ bụrụ na ị na-etinye ihe oyiyi a dị ka akwụkwọ ahụaja nke ekwentị Samsung gị, okuku. Ngwanu, anwala ya, n’ihi na otu a ka odi. N'ezie, enwere eri na Twitter ebe mmadụ gbara mbọ hụ na ekwentị ha nwere nkwarụ na-enweghị ike ibido ya. Ọ dị ka anwansi voodoo, ma ọ bụ na anyị ga-ahụ ebe ihe niile a mechara. Nke a bụ ihe kpatara ya.
La Onye ọrụ nyere ihe onyonyo nke Samsung ekwentị Na okuku nsogbu, ihe ngwọta kemgbe ihichapu data site na ekwentị. Ndị ọzọ okwu, a ike nrụpụta na-enwe ike ịmalite ekwentị gị na-atụfu niile ngafe data.
-? (@ nnadozie1) Nwere ike 31, 2020
La ihe kpatara nsogbu mberede a bụ n'ihi nsogbu na profaịlụ agba 'Google Skia'. Ọ bụ ihe anakọtara na obodo ndị Korea. N'ezie, ọ bụrụ n'ịgbanwe agba profaịlụ na RGB, ị ga-eji "ike" ahụ mebie ekwentị.
N'eziokwu anyị na-aga ịkọrọ naanị retouched akwụkwọ ahụaja ya mere unu anwala ya. Na ntanetị Twitter anyị kesara, enwere ụfọdụ "ndị dike" ndị debere ekwentị ha na oji na onyonyo ahụ. Ọbụna o yiri ka ọ na-emetụtakwa Google Pixel na na emulator ọ nwere ike imechi Sistemụ UI.
Thatbụ na ọ nwere ike, anyị na-echere ihe omimi nke gbara akwụkwọ ahụ aja na enweghi ike mechie ekwentị gam akporo gị. Kedu afọ anyị nọrọ, ọbụna akwụkwọ ahụaja nwere ike imebi mkpanaka. Ọ bụrụ na ịnata ya site na enyi, ma ọ bụ tinye ya. Can nwere ike ịdọ aka ná ntị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ akwụkwọ ahụaja ike nke igbochi gị Samsung ekwentị?